China okuzenzakalelayo Shampoo Ukugcwalisa Machine Line ifektri kanye nabaphakeli | Sawubona
Okuzenzakalelayo Shampoo Ukugcwalisa Machine Line
Lo mugqa womshini wokugcwalisa amabhodlela ulungele izinto eziphezulu ze-viscosity ezigcwalisa ukufaka amakhebuli nokulebula. Singakwazi ukuhlomisa umugqa wonke kusuka ku-feeder yamabhodlela kuya kumqoqi wamabhodlela ngomugqa ophelele wokukhiqiza.
I-Shampoo Bottle Filling Capping Labeling Machine Linear Line
Umugqa Womshini Wokugcwalisa I-Shampoo Okuzenzakalelayo
Umshini usetshenziselwa izinhlobo ezahlukene zamabhodlela ayindilinga nebhodlela elime ngendlela engafanele ekudleni, ekhemisi nasembonini yamakhemikhali, njengamakha, uwoyela obalulekile, i-lotion yezimonyo, imikhiqizo yamakhemikhali noketshezi ngomlomo njll.
Lo mshini uhlanganisa ukuzondla ngamabhodlela okuzenzakalelayo, ukugcwalisa, ukufaka ilebula yomshini wokufaka umshini kanye nephrinta ye-jet jk njll Kuya ngokuthi mingaki imishini iklayenti efuna ukuyi-oda nokuthi iklayenti lamandla lidingani.
● IsiNgisi esibonisa ukusebenza komshini womuntu, okulula nokuqondakala kalula
● Ukwakhiwa komugqa kwenza kube lula ukuxhumana neminye imishini.
● Zonke izingxenye ezihlangana nezinto zenziwe ngezinto zensimbi ezingenasici ezisezingeni eliphakeme. Ukuxhumana nezinto ezibonakalayo kusetshenziswa ukugcwaliswa kwe-SUS 316L Servo.
● Ukulawulwa okungenisiwe okuhleliwe + kokulawulwa kwesikrini sokuthinta okungenisiwe, ukusebenza okuzinzile nokwethenjelwa okuphezulu.
● Idizayini engangeni manzi yetafula, okulula ukuyihlanza ngamanzi.
● Idizayini yokuqaqa esheshayo, ukuqaqa kalula ipayipi lepompo le-peristaltic
● Isiguquli semvamisa silungisa isivinini ukuhlangabezana nezidingo zokugcwaliswa kwemikhiqizo ehlukile.
● Akukho bhodlela elingenawo umsebenzi wokugcwalisa, umsebenzi wokubala okuzenzakalelayo wokukhipha
● Ukutholwa okuzenzakalelayo kokungena nokuphuma kwebhodlela ye-photoelectric sensor, ukufaniswa okuzenzakalelayo kwesenzo somshini.
Langaphambilini Umugqa Ogcwele Wokugcwalisa Umshini Wokugcwalisa Isiraphu
Olandelayo: Uhlobo Oluzenzakalelayo Lwekomidi Lokugcwalisa Umshini Womshini
Umshini Wokugcwalisa Ukhilimu
Umshini Wokugcwalisa I-Lip Gloss
Umshini Wokugcwalisa Amakha